समीक्षा: आईप्याडका लागि McGruff SafeGuard ब्राउजर
आईफोन र आइपड सुझावहरू र ट्रिक्सहरू
by एन्डी ओ डोननेल
जब म एउटा बच्चा थियो, म्याकग्राफले कुकुरको लडाइँलाई एकदम ठूलो सम्झौता गर्यो। उहाँ टिभिमा हुनुहुन्थ्यो र कहिलेकाँही स्थानीय स्थानीय घटनाहरूमा देखा पर्नुभयो (वा कम्तीमा कसैले उसको पोशाकमा राखे)। म अझै पनि उनको आदर्श वाक्य सम्झन्छु "अपराधबाट टाँस्नुहोस्"। म सधैं आश्चर्यचकित भए जो McGruff अपराध कुकुर र Smokey भालू को बीच एक लडाइँ मा जीत हुनेछ।
म्याकग्राफले मेरो रडार छोड्यो जबसम्म मैले आईक्युन्स एप स्टोरमा म्याकग्राफ सेयरगृह ब्राउजर अनुप्रयोग देखेको थिएँ। मैले सोधे कि अवधारणा एक महान विचार थियो। मेरो सँधै आईप्याड प्रयोग गर्दा मेरो सँधै अनुपयुक्त सामग्रीलाई फिल्टर गर्न सक्षम भएको छु। McGruff SafeGuard ब्राउजर एक नि: शुल्क अनुप्रयोग हो, त्यसैले मैले यसलाई एक बिरुवा दिने निर्णय गरे।
तपाइँले एप स्थापना गर्न पछि, तपाइँका बच्चाहरूले यसलाई प्रयोग गर्नु अघि यसलाई कन्फिगर गर्नु पर्छ। तपाईंले आफ्नो ई-मेल ठेगाना उपलब्ध गराउनु पर्छ, अभिभावकीय नियन्त्रण पासवर्ड सेट गर्नुहोस्, र यसको प्रयोग गरिने बालबालिकाको उमेर दायरा इनपुट गर्नुहोस्, सम्भवतः उमेर-उपयुक्त सामग्री फिल्टरिङ स्थापना गर्न।
तपाइँले पनि आफ्नो आईप्याड (सेटिङ् आइकन) मा अभिभावकीय नियन्त्रण सक्षम गर्न आवश्यक छ ताकि तपाईले बच्चाहरूले ब्राउजरलाई अन्य ब्राउजर प्रयोग गरेर ब्राउजरलाई परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्न जस्तै आईप्याडको निर्मित इन सफारी ब्राउजर। यो गर्ने सबै भन्दा राम्रो तरिका प्रतिबन्धित कन्फिगुरेसन क्षेत्रमा सफारी बन्द गर्न र "अनुप्रयोग स्थापना" बन्द गर्दछन्। तपाईं पनि आफ्नो iPad मा कुनै अन्य तेस्रो पार्टी ब्राउजर हटाउन चाहानुहुन्छ।
सेटअप पुरा भएपछि, तपाईं Google अनुकूल खोजी पेजको साथ प्रस्तुत गरिएको छ जुन अनुपयुक्त सामग्रीलाई रोक्नको लागि फिल्टर लिंक देखा पर्दछ। तपाईंको बच्चा पनि स्क्रिनको शीर्षमा यूआरएल पट्टीमा जान सक्छ र म्यानुअल रूपमा वेब ठेगानामा प्रविष्ट गर्न सक्दछ यदि तिनीहरू चाहन्छन्। मैले Google मा प्रवेश गरे र मुख्य गुगल खोज होमपेजमा लगियो।
मैले टायर लात गर्न र Google होमपेजमा छवि ट्याबमा क्लिक गर्न निर्णय गरे। मैले खोजी सर्तमा लेखेको छु जुन कुनैपनि रातो रगत भएको हो हार्मोनले 13 वर्षीया केटाले भरिएको प्रयास गरिन सक्छ र नतिजाहरु संग स्वागत गरिसकेका थिए, त्यति धेरै स्पष्ट छैन, अझै पनि अति अनुचित थियो।
मैले केहि राम्ररी वयस्क साइटहरूको लागि युआरएलहरूमा टाइपिङ गर्ने प्रयास गरेँ र म्याकग्राफ ब्राउजरले मलाई कुनै पनि साइटहरूको भ्रमण गर्न अनुमति दिएको थिएन।
एउटा विशेषता हो जुन ब्राउजर टआउट तपाईंको बच्चालाई अनलाइन गरिरहेको छ भनेर निगरानी गर्ने क्षमता हो। मैले देखेको पहिलो स्थान इतिहास ट्याब थियो । दुर्भाग्यवश, अनुप्रयोगको साथ ग्लिच जस्तो देखिन्छ किनभने यसले मेरो लागि कुनै पनि इतिहास देखाउँदैन तापनि मैले धेरै मिनेटको ब्राउजर प्रयोग गरिरहेको थिएँ। पासवर्डको अभिभावक नियन्त्रण क्षेत्रमा अर्को क्षेत्र थियो जुन "लग लग" विकल्प छ, तर लगइन अत्यन्तै क्रिप्टिक र बुझ्न गाह्रो छ। यो एक विकासकर्ता तिर अझ बढी देखा पर्यो जसले आमाबाबु बनाएर प्रोग्रामलाई डिबग गर्दै छ भनेर पत्ता लगाएको छ कि उनीहरूको बच्चा वेबमा भ्रमण गर्ने प्रयास गर्दछ।
म अंततः "साइट हाल नै अस्वीकृत साइट्स" सेटिङ क्षेत्रमा भ्रमण गरेर कुन साइटहरू ब्लक गरिएको देख्न सक्षम भयो। जबकि सहज छैन, यसले कम से कम साइटहरु को सूची प्रदान गर्दछ जो फिल्टर द्वारा ब्लक गरियो। जबकि यो अवरुद्ध साइटहरू देखापर्यो, यसले साइटहरू सफलतापूर्वक देखाउन सकेन, न त यो तपाईंलाई निर्दिष्ट साइटहरू रोक्न जुन फिल्टरहरू मार्फत फिसलिएको हुन सक्छ।
म्याकग्राफ एपले यसो भन्छ कि यसले तपाईंलाई तपाईंको बच्चाको इन्टरनेट गतिविधि (वा निष्क्रियता) प्रत्येक दिन सारांश पठाउनेछ। म McGruff बाट ई-मेल प्राप्त गरें, तथापि, यो निर्दिष्ट नहीं गरेको थियो, यो केवल भन्यो कि साइटहरु को एक्स संख्या को दौरा गरियो र एक्स साइटहरु को अवरुद्ध गरियो। आमाबाबुको रूपमा, मलाई थप विवरण चाहिन्छ। कुन साइटहरू ब्लक गरियो? तिनीहरू कुन साइटहरूमा गए? यी आधारभूत चीजहरू जुन आमाबाबु जान्न चाहन्छन्।
एक अन्य कुरा जो मलाई परेशान थियो, यो एक विज्ञापन-समर्थित नि: शुल्क अनुप्रयोग हो जुन ऐन एप खरीदको साथ 99 सेन्टको लागि विज्ञापन बन्द गर्न, नि: शुल्क संस्करणमा विज्ञापनहरू पूर्ण अप्रासंगिक छन्। मेरो बच्चा कार निर्माताहरू, बीमा, र अन्य चीजहरूको सबै अभिनेताहरूबाट विज्ञापनहरू प्राप्त गरिरहेको थियो जुन उमेर उपयुक्त थिएन। यदि तपाइँ विज्ञापनहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने, कम से कम तिनीहरूलाई उमेर समूहमा ब्राउजर प्रयोग गरिने छ।
एप्स आफैं किनाराको वरिपरि थोरै घटेको छ र यसको "0" संस्करण रहेको छ यसको यसको 2.4 संस्करण मोनिकरको बावजूद। मेरो केहि घूर्णन स्क्रिन अभिविन्यास समस्याहरू थिए जहाँ म केहि क्लिक गर्थे र स्क्रिन परिदृश्यबाट पोर्टमा घुमाउनेछ तापनि मैले आईप्याड सार्न सकेन।
सबै दोषहरू अलग्गै, एप नि: शुल्क छ र उत्कृष्ट अवधारणा हो। नेटमा बाहिर रहेका सबै खराब सामग्री फिल्टर गर्दै कम से कम भन्नको लागि एक चुनौतीपूर्ण चुनौती हो। म्याकग्राफ पनि यो प्रयासको लागि प्रशंसा गरिनु पर्छ। यदि भविष्य भविष्यमा केहि कंकहरू बाहिर काम गर्न सक्दछ भने मलाई लाग्छ कि यो एपले तपाइँको बच्चाहरूलाई कम्तीमा केही क्रेपमा इन्टरनेटमा राखेर आमाबाबुलाई मद्दत गर्न ठूलो उपकरणको सम्भव छ।
McGruff SafeGuard ब्राउजर fro नि: शुल्क iTunes App Store मा उपलब्ध छ।
आईपीओफोन डाटा रोमिङ शुल्क कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने?
आईफोन मेलको साथ फोटो वा छवि कसरी पठाउनुहुन्छ?
IOS मेलमा समूह मेलिङका लागि सम्पर्क कसरी सेट अप गर्नुहोस्
तपाईंको आईफोनको पासकोडलाई कसरी बलियो बनाउने?
15 सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रयोगयोग्य आईफोन मेल र आईप्याड मेल सुझावहरू
ITunes Store मा आईफोन संगीत विकल्प
आईओएस मेलमा एक सन्देश छिटो पुरालेख वा सन्देश मेटाउन सिक्नुहोस्
तपाईंको आईफोन चार्ज गर्ने पोर्ट कसरी सफा गर्ने
बिग आईफोन डेटा रोमिङ बिलहरूबाट बच्न उपायहरू
2018 मा खरीद गर्न 11 सर्वश्रेष्ठ भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर
रेटिना प्रदर्शन के हो?
पीएसटी फाइल के हो?
आउटलुक मेलमा Outlook.com मा फोल्डर.com लाई कसरी मेटाउने?
एक्सेल VLOOKUP सँग एकाधिक फिल्ड डाटा फेला पार्नुहोस्
के एप्ससँग आइपुगेका अनुप्रयोगहरू?
कसरी तपाईंको DTV कन्वर्टर बक्स समस्या निवारण
सभ्यता IV पीसी खेल धोखा कोड
Google नक्सामा स्थान कसरी सम्पादन गर्ने?
Wi-Fi सुरक्षित सेटअप (WPS)
Chromebook बाट अनुप्रयोगहरू कसरी हटाउने?
मोबाइल गेम घोटाले कसरी बचाउनुहुन्छ?
वक्ताहरूका लागि कतिवटा बिटहरू हुन्?
Adobe Photoshop मा कसरी एक खराब स्काई समाधान गर्न
Wi-Fi मार्फत म्याकमा तपाईंको इन्टरनेट जडान कसरी साझा गर्ने?
AIM वा AOL मा स्वचालित रूपमा हिज्जे जाँच गर्ने
ईस्टर eCards, फेसबुक मा तपाईं को लागि मजा
2018 मा खरीद गर्न7उत्तम चार्ज स्टेशनहरू
पीएलएस फाइल के हो?
सर्वश्रेष्ठ होम थिएटर सेटिंग विकल्प 2018 को लागि
8 बेस्ट एसटा डीभिडी / सीडी बर्नरलाई 2018 मा खरीद गर्न
म्याक मैलवेयर नोटबुक